जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री देउवाले के भने ? (पूर्णपाठसहित) | Citizen Post News
जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री देउवाले के भने ? (पूर्णपाठसहित)
२०७४ फागुन ३ गते १८:२४
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तीनै तहको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौ । यसबाट मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा निर्णायक रुपमा अघि बढाउन बलियो आधारशिला निर्माण भएको छ । यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली दिदीवहिनी दाजुभाईहरुलाई म हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै,यस अवसरमा म नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रातंस्मरणीय शहीदहरु र अग्रज नायकहरुलाई ससम्मान स्मरण गर्न चाहन्छु ।
तथापि आदरणीय नेता सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वको सरकारले २०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो । जनताको अत्यधिक मतसहितबीपी कोइराला नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।
संविधान निर्माण गर्न नसकि पहिलो संविधानसभा विघटित भएपछि हामी सबैको सुझबुझबाट २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । आदरणीय नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दोस्रो संविधान सभाले २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण ग¥यो । संविधान निर्माण पश्चात् पनि केही कुरामा असहमत भएर लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग भएका राजनीतिक दललाई नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलधारमा समाहित गर्नुपर्ने काम बाँकी थियो । संविधान निर्माण लगत्तै बनेको सरकारले त्यो काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले हामीले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने ठोस प्रतिबद्धतासहित नयाँ बाटो खोजी गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु गर्यौ । पहिलो दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए । प्रदेश नम्वर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने काम बाँकी थियो ।
मैले मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पद सम्हाल्न आउँदा गरेका संबिधान कार्यान्वयन गर्ने र शान्तिपूर्ण रुपमा आम सहभागितामा निर्वाचन गराउने मेरा प्रतिवद्धताहरु पुरा गरेको छु ।संघीयता कार्यन्वयनका लागि नयाँ ऐनहरु, प्रशासनिक पुनर्संरचना अनुरुप जनशक्तिको व्यवस्था र अन्य प्राविधिक तयारीलाई तिव्रता दिएको छु ।
यो सरकारले विशेष महत्वका साथ अनुगमन गरेको अरुण तेश्रो र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन, हुलाकी मार्ग र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति राम्रो छ ।
केही दिन अघि मात्र मैले दार्चुलामा तीस मेगावाटको चमेलिया विद्युत आयोजना र जुम्लामा तीन सय शैय्याको आधुनिक अस्पतालको उद्घाटन गरें । अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज आयोजना अन्तर्गत इतिहासमै सबभन्दा ठुलो अनुदान सम्झौतामा यो सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । तदनुरुप पचास अरब रुपैयाको लागतमा ३०० किलोमिटर जति उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन बन्ने र सडक सुधार गर्ने कार्य हुनेछ । गरिवी निवारणका लागि गरिवी निवारण कोषलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । समृद्ध नेपालको हाम्रो यात्रामा यो महत्वपूर्ण आधार हुने विश्वास मैले लिएको छु । राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परराष्ट्र नीति संचालन भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन र अन्य मित्रराष्ट्रहरुसँग पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रही सम्वन्ध सुदृढ गर्ने र सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता हो । हाम्रा दुई विशाल छिमेकीहरु भारत र चीनसँगको ऐतिहासिक र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धलाई मेरो कार्यकालमा थप विश्वसनीय र सम्मानमा आधारित बनाइएको छ ।
गत भाद्रमा मैले गरेको मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणले हाम्रो सम्बन्धमा आपसी समझदारी र विश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरुबाट आपसीसहयोगका क्षेत्र थप विस्तार भएका छन् । पारस्परिक सहयोगका आयामहरुलाई नयाँ दिशामा लगिएको छ । हाम्रो विकासमा साझेदार अमेरिका, वेलायत, जापान, युरोपियन मुलुकहरु लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदायका सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग आपसी सम्वन्धलाई सदृढ बनाउन हामी प्रयत्नरत रहयौ । म उहाँहरु सबैको सद्भाव, सहयोग र समर्थनका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
मेरो कार्यकालमा संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको प्रभावर भूमिका विस्तारित भएको छ । मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा अधिकतम मतसहित नेपाल निर्वाचित भयो । अति कम विकसित मुलुकहरुको दर्जाबाट स्तरोन्नती हुने राष्ट्रसंघीय प्रकृयामा गम्भीर तयारीका साथ नेपाल सहभागी भएको छ । सन २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष प्राप्तिका लागि रणनीतिक रोडम्याप तयार गरिएको छ ।
विविध चुनौतिका बावजूद भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अभियानले गति लिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्धारित पाँच वर्षे कार्यकालको मध्यावधिमा निजी आवास अनुदान सम्झौता गर्नेहरु मध्य झन्डै साठि प्रतिशतले घर निर्माण सम्पन्न गरेका वा गर्ने क्रममा छन् । भूकम्पले पहाडमा पु¥याएको दुःख जस्तै यसै वर्ष आएको बाढीले तराइ मधेशका जनतामा ठुलो क्षति पु¥याएको छ । तत्काल उद्धार र राहत दिदै यो सरकारले विधिवत् आवश्यकताको आँकलन गरी दीर्घकालीन कार्य योजना ल्याएकोे छ ।बाढीपछिको पुनरुत्थान अनुदान सहित संस्थागत रुपमै अघि बढाउन पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा विशेष ईकाइ गठन गरिएको छ ।
लोकतन्त्रलाई आस्था नभै साधनको रुपमा मात्र बुझ्ने, राष्ट्रिय एकताबारे संकुचित र हलुका टिप्पणी गर्ने, कुनै भेगका जनताले अधिकारको कुरा गर्दा तिनलाई राष्ट्रविरोधी देख्ने, समृद्धिको गहनतालाई अविश्वसनीय नारामा कैद गर्ने राजनीतिक अवसरवादको जमाना अब सकिनु पर्दछ । विविध जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, धर्म र समुदायबीचको सम्वन्धलाई एउटै मालामा गाँसेर हामी राष्ट्रियतालाई थप मजवुत बनाउन चाहान्छौ । मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र आर्थिक प्रगति लोकतान्त्रिक व्यवस्था भित्र नै संभव हुन्छ र अहिंसा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभिन्न अंग हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता विभिन्न वाद र पथ अगाल्ने सबैकालागि स्वीकार्य बाटो बनेको छ ।
मैले धैर्य नगरेको भए, संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने अनवरत प्रयत्न नगरेको भए संक्रमणकाल टुंगिने थिएन । वल प्रयोग गरेर निर्वाचन गरेको भए प्राविधिक रुपमा संक्रमण त सकिने थियो होला तर मुलुक फेरि हिंसा र अस्थिरताको दुस्चक्रमा फस्ने थियो । म चाहन्थे काठमाडौंले मात्रै होईन तराई–मधेस, हिमाल–पहाडले पनि संविधानमा आफ्नो प्रतिविम्व देखोस् ।समग्र राष्ट्रलेनै राजनीतिक संक्रमण सकिएको र आर्थिक समृद्धिको युगमा मुलुक प्रवेश गरेको अनुभुत गरोस् ।
स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रियसभा पनि निर्वाचन भइसकेको छ । एकतिहाई महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको सांसदहरुको नामावली सिफारीस गर्ने कार्य सकिएको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि नामहरु समेत सिफारीस भैसकेको छ । प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त भैसकेका छन् । केही प्रदेशमा सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । बाँकी प्रदेशमा केही दिनमै सरकार निर्माण र प्रदेशसभा नेतृत्व चयन गर्ने कार्य पुरा हुनेछ । संविधान कार्यन्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मेरो जिम्मेवारी पुरा भएको छ । नयाँ संघीय सरकार निर्माण गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौ ।
यसका लागि मैले आजैको मितिबाट प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु । तर, सरकारको नेतृत्वमा नरहे पनि जनताको सुःख दुःखमा मेरो पार्टी र म सदा सर्वदा क्रियाशिल रहने छौ । नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा हाम्रो निष्ठापूर्ण प्रतिवद्धता रहने छ । अव बन्ने नयाँ सरकारलाई दिगो शान्ति, सहमति र एकता कायम राख्दै राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा काम गर्न सफलता मिलोस, मेरो यही शुभ कामना छ ।